Gbasara Anyị - Yancheng Meiyi Arts & Crafts Factory
Chelọ ọrụ Yancheng Meiyi Arts & Crafts
Elekwasị anya na ikanam akara n'ichepụta
Yancheng Meiyi Arts & Crafts factory, guzosie ike na 2005, pụrụ iche na n'ichepụta na exporting Ikanam emeghe akara, Ikanam ide bọọdụ, Ikanam ìhè igbe na ndị ọzọ Ikanam sign.We na-emekwa ụfọdụ na a na ubi ruo ọtụtụ afọ na nwere otutu na ọkachamara ọrụ otu na-anapụta elu àgwà na ngwaahịa nkwado ọhụrụ nwere ọnụ ahịa asọmpi na ahịa ụwa.
Anyị na-etinye aka na mgbasa ozi Led na ngwaahịa eletrọniki, nke ebupụtara na mba karịrị 50 na mpaghara, dịka America, Europe, Japan, Australia, Middle East wdg, yana ụdị ngwaahịa nkwado ndị metụtara ihe karịrị 1000 iche. Ihe omuma anyi nile bu ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi iji nyere aka ichebe gburugburu ebe obibi! Ihe ịrịba ama ndị a bara uru nke ukwuu, na-enyere aka dọta uche ndị mmadụ. Ọkụ na-adịgide adịgide nke ga-enye ihe ruru 100,000hrs, dị ukwuu maka iji ya mee ihe n'ihu ọha ruo ogologo oge.
ANY PR ỌR PR ANY PR
Anyị na-esonye n’ihe ngosi ahụ iji mee ka ọtụtụ ndị ahịa mara ngwaahịa na ọrụ anyị.
Itinye maka patenti bụ ichedo ngwaahịa a na ịbụ onye ahịa gị.
Anyị isi ahịa bụ Western Europe, North America, South America, dị ka United States, France, Sweden, Venezuela…, anyị nwekwara ndị nkesa na iche na mpaghara ndị a. Anyị nwere ezigbo otuto na aha n'etiti ndị ahịa anyị n'ihi na anyị na-enye oke mma ngwaahịa ngwa ngwa nnyefe, ọrụ zuru oke, na imewe pụrụ iche.
Anyị na-ekwusi ike na mmụọ nke "Ezi Ogo, Ọnụ Ahịa Mpempe, Nzipu Oge, Ike Nka na Nwepụta Nkwado". A ga - enyocha ngwaahịa anyị niile site na usoro izizi gaa na usoro ikpeazụ. Mgbe-sales na-nyere maka onye ọ bụla ngwaahịa si anyị ụlọ ọrụ.
Ebumnuche anyị bụ igosi ngwaahịa anyị na ọrụ kacha mma maka ndị ahịa anyị n ’ụwa niile. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, anyị ga-anwa ike anyị niile. Anyị ebupụla ihe anyị na mba ofesi karịa afọ 12 ma nwee ahụmịhe zuru oke na ọnọdụ mmepụta na mbupu ụgbọ mmiri.
Anyị na-atụ anya working gị gị! Nweta -Imekorita!